Blob ahụ, oge anomaly nke okpomọkụ na North Pacific | Netwọk Mgbasa Ozi
Nụla okwu ahụ bụ "eziokwu bụ onye ọbịa karịa akụkọ ifo" ọtụtụ puku ugboro. Nke a na-eme mgbe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ akwụkwọ azụ nọ na-agbago n'akụkụ ugwu Oké Osimiri Pasifik na ọtụtụ puku akàrà, agụụ na-agụ ha n'ụsọ oké osimiri California. Panorama nke mgbanwe site na mgbanwe mmiri dị n’oké osimiri mere na 2016. Ihe a kpọrọ aha a “La mancha”, site na Bekee Blob ahụ.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe bishọp ahụ bụ na mmetụta ọ nwere na gburugburu gburugburu ya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, nke a bụ post gị.
1 Kedu ihe bụ blob
2 Mmetụta nke Ọrịa na mbara igwe
3 Ọcha ahụ apụta ọzọ
Kedu ihe bụ blob
Anyị na-ekwu maka anomaly na oke mmiri mmiri na mpaghara North Pacific. Mgbanwe a na ọnọdụ okpomọkụ emeela ka ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ ihe mere mmiri ji sie 4 Celsius elu karịa nke kachasi elu. Ọnọdụ okpomọkụ a sitere na Mexico ruo Alaska na ọ dịrị warara nke dị kilomita 1600 n'obosara.
Ndị ọkà mmụta sayensị gụrụ anomaly a bụ otu ndị nyocha nke ndị ọkachamara si Mahadum Washington duziri. E bipụtara ọtụtụ isiokwu na akwụkwọ sayensị Akwụkwọ edemede Gọọmenti nke Geophysical na-akọwa ihe ndị nwere ike ime ka La Mancha. Ha amaliteworị ịchọpụta mmụba na okpomọkụ n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 2013 na mbido 2014. Mmiri a anaghị ajụ oyi ka ọ na-adịkarị, ya mere n’oge opupu ihe ubi nke otu afọ ahụ ọ dị ọkụ karịa ka a hụtụrụla n’oge ahụ n’afọ.
Okwu ahụ E mepụtara blob ahụ dịka o nwere udi ọfụma nke na-egosi mpaghara ebe okpomọkụ na-arịwanye elu na-adịghị mma. Eziokwu a mere ka ọtụtụ ndị mmadụ chee na ọ bụ ụdị ịdọ aka na ntị na okpomoku ụwa na-ebute mmụba a na-adịghị ahụkebe na mmiri mmiri dị na Pacific na ọ nwere ike imetụta ihu igwe n'ọtụtụ Ebe ugwu America.
Mmetụta nke Ọrịa na mbara igwe
Dika anyi maara, ihe ndi ozo sitere n'okike, ma o bu nke oke mmiri ma o bu nke nke uwa, nwere usoro obibi obibi. Ntụle a na-adịkarị oge ma ọ bụ na-erughị oge ma bụrụ ụdị nkwekọ n'etiti ụkpụrụ niile nke mgbanwe ndị na-emetụta usoro okike. Agbanwe dị ka okpomọkụ, ọchịchị ikuku, ọkwa mmiri ozuzo, ịdị adị nke flora na fauna, pH ala, nri, wdg.
N'okwu a, anyị na-ekwu maka mmetụta na gburugburu ebe obibi niile mgbe mgbanwe mberede na otu n'ime ụkpụrụ nke mgbanwe ndị kachasị mkpa na-emetụta ọnọdụ nke usoro okike: ọnọdụ okpomọkụ. Anyi nwere ike ichota na n'ime ihe ndi ozo, mmiri bu otu n'ime ihe ndi kachasi mkpa iji weputa oke nke umu anumanu na umu osisi nwere ike ibi.
Ọ bụrụ na ụkpụrụ nke nkezi okpomọkụ nke ndị dị ndụ na mpaghara ndị a na-ejikarị emezi ihe gbanwere a nso nke 4 degrees centigrade si nkịtị, ihe mbụ ị nwere dị iche iche na-adịghị mma mmetụta. Mmiri ọkụ ahụ nwere mmetụta dị ukwuu na gburugburu ebe obibi, na-eweta nnukwu nsogbu na usoro nri nri nke ọtụtụ ụdị dabere. Ọ bụrụ na ụdị kachasị dị nro na mmalite bụ mmalite nke usoro nri, mgbanwe a na uru nke okpomọkụ ga-emetụta gburugburu ebe obibi.
Ọmụmụ ihe ndị e bipụtara metụtara ntụpọ mmiri ọkụ na ngbanwe na ihu igwe ihu igwe dị elu n'oge oyi nke afọ 2013-2014. Ihe omuma ihe omuma a nwere mgbanwe n'ihi Pacific Oscillation na ihe omuma El Niño. Ndị ọkachamara gbalịrị ịkọwapụta ihe dị iche iche banyere usoro nke mere n'oge ahụ mana ha enweghị ike iru nkwubi okwu banyere oke ma ọ bụ mmekọrịta ya na usoro ndị ọzọ metụtara mgbanwe ihu igwe.
Echere na mgbanwe ndị a na ọnwa ndị na-adịbeghị anya kpatara naanị mgbanwe nke ihu igwe, ebe ọ bụ na ihe a niile mere na mgbanwe dị iche iche, dị ka ndị ahụla na okpomọkụ na-arịwanye elu, ga-adịwanye nkịtị ka afọ na-aga.
Ọcha ahụ apụta ọzọ
Mgbe echere na nke a agaghị eme ọzọ, na Septemba 21, 2019, achọpụtara ebili mmiri ndị ọzọ dị na mmiri nke mepụtara site na mmụba nke oke mmiri na-adịghị ogologo na ogologo oge n'otu ebe. Maka mmụba a na okpomọkụ iji nwee mmetụta, ọ ga-adịgide ma ọ dịkarịa ala oge nke ụbọchị ise.
Mgbe enwere obi abụọ banyere ma ihe omume ndị a ọ na-eme ugboro ugboro n'ihi mgbanwe ihu igwe, a na-eme nnyocha na otu isiokwu bipụtara na akwụkwọ akụkọ ahụ Mgbanwe ihu igwe que na-ekwu na ihe ịtụnanya ndị a bụ 17% ogologo karịa n’etiti 1987 na 2016. Ọmụmụ ihe ọhụrụ a jikọtara ọdịdị nke ebili mmiri mmiri na mmetụta na-emebi ihe na gburugburu ebe obibi. Ka oke osimiri na-ekpokwu ọkụ karịa n'ihi mmụba nke okpomoku zuru ụwa ọnụ, ebili mmiri a na-eme mmiri na-adịwanye ogologo oge.
Ọ bụrụ na nke a gaa n'ihu, mmetụta dị na mbara igwe ga-adịwanye ukwuu. Ihe omume Blob kacha ọhụrụ na-eme ka ndụ mmiri na-egbu mmiri na mmiri ọwụwa anyanwụ Pacific, ọkachasị mkpịsị akwụkwọ nke anyị maara nwere nnukwu nsogbu na mgbanwe okpomọkụ. Ọzọkwa, o butere ọdachi ọnọdụ akụ na ụba n'akụkụ niile nke ịkụ azụ ka azụ azụ na-ebelata.
Dịka ọmụmaatụ, anụmanụ ndị kachasị mmụba na okpomọkụ bụ ndị na-enweghị ike ịkwaga na mmiri oyi na ndụ ha dị oke egwu. Ugbu a ndị ọkà mmụta sayensị na-eche ka oke ikuku ọkụ mmiri na-ebibi ihe na-emepe, na-edekọ ihe ọhụụ ọhụrụ na Oke Osimiri Pasifik. Ha bụ nnukwu ntụpọ edere nwere okpomọkụ karịrị ogo 3 karịa ụkpụrụ dị elu.
Enwere olile anya na ndi anomalies a kwusi inwe mmetụta na ndu mmiri. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Blob.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Blob ahụ